Looking forward to 2021 — ၂၀၂၁ ဆီသို့မျှော်မှန်းခြင်း – Free Expression Myanmar
Jan 08, 2021 by Coordinator	in News သတင်း
ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါ သည် ကမ္ဘာကြီးကို ဖျက်ဆီး ထိခိုက်စေခဲ့သောကြောင့် FEM သည်လည်း နည်းလမ်းအသစ်ဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းကို ထိန်းညှိဆောင်ရွက်ရန် ကြိုးစားခြင်းဖြင့် အပြောင်းအလဲများ စွမ်းဆောင်ရယူရင်း ၂၀၂၀ ကိုကုန်ဆုံးဖြတ်သန်းခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ၂၀၂၁ ကိုဦးတည် မျှော်မှန်းနေပါသည် ။
ကိုဗစ် ၁၉ ဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် အောင်မြင်မှု အချို့ ရှိခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေအဆုံးအဖြတ်များနှင့် အတွေ့အကြုံများ ၊ အင်တာနက်လွတ်လပ်မှု အခြေအနေ ၊ သတင်း မီဒီယာကဏ္ဍလွတ်လပ်မှု ရေစီးကြောင်းအခြေအနေ စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ အခြေအမြစ်ကျ သော အသိပညာများကို တိုးမြင့်ပြန့်ပွားစေသည့် အဓိကကျသော အစီရင်ခံစာများကို FEM မှ ထုတ်ဝေမိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကတိကဝတ်များကို သိမြင်မှုနိုးကြားစေရေး ကမ်းပိန်းသည် 2020 အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၏ နောက်ဆုံးနေ့များ တွင်မဲပေးသူ တစ်သန်းကျော်ထံ ရောက်ရှိခဲ့ပါ သည်။ယင်းပမာဏသည် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်း အတာဖြင့် လူပေါင်း ၅၀၀,၀၀၀ ထံ ရောက်ရှိခဲ့ သည့်န်ုပ်တို့၏ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှု ဆန့်ကျင်ရေး ကမ်ပိန်းကို ကျော်ဖြတ်သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့် သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့်အတူနှစ်နှစ်ကျော်ကြာ လုပ်ဆောင်ဖြစ်ပေါ် စေ၍အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ၅၀ ကျော် အတည်ပြုထောက်ခံပေးခဲ့သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း အဆိုပြုချက်များကို ထုတ်ဝေမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး လွှတ်တော်၏ နိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ပေးရေး ဥပဒေ ကို ပြင်ဆင်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့ပါသည် ။
စိတ်မကောင်းဖွယ်ရာအနေဖြင့် လေးကြိမ်မြောက် MDRF တွင် အင်တာနက် ပိတ်ဆို့မှု အကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်အမတ် ဦးကျော်ကျော် ၏ ကွယ်လွန်မှုအပါအဝင် ဆုံးရှုံမှု အချို့၂၀၂၀ တွင် ရှိခဲ့ပါသည် ။
ဒီဂျစ်တယ်အခွင့်အရေး သိသာစွာကျဆင်းသွားပြီး ကမ္ဘာ့အကြာဆုံးအင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုနှင့် အတူဒီမိုကရေစီအရဖြစ်သော သတင်းမီဒီယာများ နှင့်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို ပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီး ဆင်းကဒ်သန်းပေါင်းများစွာပယ်ဖျက် ခံခဲ့ရပါသည်။
စင်စစ်အားဖြင့် UN သို့ တင်သွင်းခဲ့သည့် FEM၏ လွန်ခဲ့သော၅ နှစ်တာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အကဲ ဖြတ်ချက်သည် အနည်းငယ်သာ ပြောင်းလဲခဲ့ဟု အချုပ်အားဖြင့်ဆိုနိုင်ခဲ့ပြီး ရိုက်တာသတင်းကိစ္စ ၏နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးဖြစ်သည့် လျှိူ့ဝှက် ဥပဒေသစ်အပါအဝင် သိသာသော မမျှော်လင့် ထားသည့် အဟန့်အတား အချို့ရှိခဲ့ပါသည်။
FEM သည် ၂၀၂၁ တွင်လည်း မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆန်းသစ်၍ အချက်အလက်ခိုင်မာသော အသိပညာပေး မျှဝေမှုများနှင့် နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများ အပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသော ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး အဖြေများကို တိုးမြှင့်ဖော်ဆောင် ရာတွင်ဦးဆောင်ဦးရွက် အနေဖြင့် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဆန္ဒပြသူများအတွက် အိတ်ဆောင် ဥပဒေအသုံးပြုစရာတစ်ခု အဆင့်သင့်ရှိနေမည် ဖြစ်ပါသည်။ လွှတ်တော်အမတ်အသစ်များ ကိုလည်းဥပဒေပြုခြင်းအတွက် လမ်းညွှန်အကြံပြု ချက်များနှင့်အတူ ကြိုဆိုသွားမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာ ကမ်းပိန်း သည်လည်း ရှေ့ဆက် ပိုမိုတိုးတက်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။
FEM သည် ဒီဂျစ်တယ်အခွင့်အရေး တိုးတက်စေ ခြင်းနှင့် တရားရုံးများတွင် ခုခံချေပသူများ၏ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုမှုကို ကာကွယ်ခြင်းတို့ကို ဗဟိုပြုဆောင်ရွက်မည့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်း သည့်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းနှစ်ခုကိုစတင်လုပ်ဆောင် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Access Now, Deutsche Welle Akademie, Chemonics, Freedom House, Heinrich Böll Stiftung, Pen America, Swedish International Development Agency, UNESCO, USAID,နှင့်USDRL စသည့် အလှူရှင်များကို ၎င်းတို့၏၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ထောက်ပံ့မှုမျာ းအတွက် FEM မှ ကျေးဇူးတင်ရှိပါ ကြောင်း ပြောကြားအပ်ပါသည်။
ယခုအချိန်တွင် FEM သည် Human Rights Law Officer/Senior Officer နေရာ နှင့် Human Rights Officer/Senior Officer နေရာ တို့ကို ခန့်အပ်ခေါ်ယူရန် ရှာဖွေနေပါသည်။
As Covid-19 ravaged the world, FEM spent 2020 trying to adjust to new ways of working while still achieving change. We are looking forward to 2021.
Despite Covid-19, there were some successes in 2020.
FEM launched major reports increasing substantive knowledge on what is happening with protest case law and experiences, the state of internet freedom, and media freedom trends in Myanmar.
Our manifesto commitments awareness campaign reached overamillion voters in the final days of the 2020 general election. Just beating our internet shutdown campaign which reached 500,000 people nationwide.
We also launched our Defamation Reform Proposal, developed with all stakeholders over two years, endorsed by 50 CSOs, and linked to parliament’s amendment to the privacy law.
Unfortunately, there were also some losses, including the death of union MP, U Kyaw Kyaw who last spoke on the internet shutdown at the 4th MDRF.
Digital rights significantly declined, with the world’s longest shutdown, legitimate media and activists’ websites blocked, and millions of SIM cards deactivated.
Indeed, FEM’s assessment of the past five years of reforms submitted to the UN concluded “very few changes whatsoever”, and some significant setbacks, includinganew secrecy law in the Reuters aftermath.
FEM will continue in 2021 to lead in developing an innovative and substantive understanding of Myanmar’s transition, encouraging contextual solutions built upon international democratic standards.
We will have new pocket law toolkits ready for protesters. We will welcome new MPs with guides to legislation. Our defamation campaign will grow further.
FEM will start two exciting new projects focusing on improving digital rights and protecting free speech defenders in courts.
FEM would like to offer its thanks to the following donors for their support in 2020: Access Now, Deutsche Welle Akademie, Chemonics, Freedom House, Heinrich Böll Stiftung, Pen America, Swedish International Development Agency, UNESCO, USAID, and USDRL.
FEM is currently looking to recruitaHuman Rights Law Officer/Senior Officer andaHuman Rights Officer/Senior Officer.